विराट-अनुष्काको 'दिवाली सरप्राइज'! :: विद्या राजपुत :: Setopati
विराट-अनुष्काको 'दिवाली सरप्राइज'!
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र भारतीय क्रिकेटका कप्तान विराट कोहलीबीचको प्रेम सबैलाई थाहा छ। उनीहरु विभिन्न पार्टी, कार्यक्रम र शो मा पनि प्रायः सँगै हिँडेको देखिन्छन्।
विराटको लागि अनुष्काले र अनुष्काको लागि विराटले आफ्नो व्यस्त समयको बीच पनि धेरै समय निकालिरहेका हुन्छन्। उनीहरु छुट्टी मनाउने बहानामा कहिले अमेरिका त कहिले श्रील‌ंका पुगीरहेका हुन्छन्।
उनीहरुको तस्वीरहरु पनि मिडियामा निकै भारइल भइरहेका हुन्छन्। जसमा उनहरुबीचको बोन्डिङ कति गहिरो छ भनि अनुमान लगाउन निकै सजिलो हुन्छ।
अहिले उनीहरुको एक तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। खासमा यो तस्वीर एउटा टीभीमा प्रसारण हुने विज्ञापनको शुटिङको हो। जुन तस्वीर इन्टरनेटमा तिव्र रुपमा स्थान पाइरहेको छ भने जोडीले पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ।
तस्वीरमा विराट अनुष्का निकै सुन्दर देखिएका छन्।
तर उक्त विज्ञापन भने अहिलेसम्म प्रसारण भएको छैन। यसकारण पनि यो जोडीको नयाँ तस्वीर यसरी भाइरल हुँदै गएको हो।
शुरुवाती दिनमा यो जोडीले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा निकै लुकाउने गर्थे। अनुष्का त अहिलेपनि आफु र विराटको सम्बन्धको बारेमा बोल्न रुचाउँदिनन्। मिडियासामु आफ्ना कुरा भन्ने मामिलामा विराट पनि अलि लजालु नै छन्। तर विराटले अहिले आफ्नो प्रेम सम्बन्धको बारेमा खुलेर कुरा गर्न थालेका छन्।
हालै उनले जीटीभीमा आउने आमिर खानको एक च्याट शो मा अनुष्काको बारेमा खुलेर बोलेको भारतीय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ।
आमिर खानसँगको विषेश शो मा विराटले अनुष्कालाई माया गरेर नुश्की बोलाउने गरेको पनि बताएका छन्। उनले अनुष्काको राम्रो विषेशताको बारेमा पनि बताएका थिए। बिराटले अनुष्काको बारेमा कुरा गर्दै उनको इमान्दारी, ख्याल राख्ने बानी आफूलाई निकै मन पर्ने बताए। यसैगरि उनले अनुष्काको मन नपर्ने बानीको बारेमा पनि कुरा गरेका छन्।
उनले अनुष्का जहाँ पनि ५ देखि ७ मिनेट ढिला आउने गरेको र यो बानी मन नपर्ने पनि बताएका छन्।
अनुष्काको तारिफ गर्दै विराटले उनी सधैं आफ्नो साथमा भएको बताए। उनले अनुष्कासँग आफ्नो तालमेल निकै मिल्ने बताउँदै अनुष्काले उनलाई असल मानव बनाएको कुरा पनि सेयर गरे।
विराट र अनुष्काको अफेयर सन् २०१३ देखि चलिरहेको छ। भारतको सबैभन्दा चर्चित जोडीको उपमा पाएका विराट–अनुष्का लामो समयदेखि एकअर्कालाई डेट गरिरहेका छन्। उनीहरुको भेट एउटा स्याम्फुको विज्ञापनको शुटिङको क्रममा भएको थियो।
सन् २०१५ मा यो जोडीबीच केही खटपट भएको खबर बाहिरिएको थियो। तर, सन् २०१६ मा दुवै फेरि सँगै देखिएका थिए।
अहिले उनीहरुको प्रेमको चर्चा बलिउड र क्रिकेट जगतमा मज्जाले चलिरहेको छ। जसलाई दुवैले स्वीकार पनि गरेका छैनन र प्रतिक्रिया पनि दिएका छैनन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ३१, २०७४, ०७:४८:३३